Tshintshano ukubheja banaba kuBheja – Intshayelelo | Amanqaku Sports News izihloko Global WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group
Amanqaku Sports News izihloko Global WebSite.WS > bonke > Tshintshano ukubheja banaba kuBheja – Intshayelelo
Tshintshano ukubheja banaba kuBheja – Intshayelelo
Kutheni A Exchange nokubheja Ngaba Ukuhambisa Wena Undoqo Gambling ngempumelelo’ intshayelelo abangcakazayo ezininzi kakhulu nangoku siphila 'babengaphuphi’ kwaye uya kuze kuphela beka bet nebhukumeyikha yemveli. Ke mhlawumbi na ku zihlupha ukufunda ukusebenza indlela efoni okanye ngokulula abaqondi iimpawu kunye nexabiso ezinokuthi xa ukubheja bume ovela. Ndikholelwe, usebenzisa exchange ukubheja kulula kakhulu, kwaye ukuba akukho sele usebenzisa exchange enye ubuncinane kufuneka liye ngokukhawuleza emva kokufunda eli nqaku’ Mna wayengathi lorhwebelwano ukubheja kufuneka isetyenziswe yonke ukubheja kwakho. Kuya kuba izihlandlo xa ukubheja yemveli izakunika kuyahlabana linokunyulwa ngaphezu kwabo ziyafumaneka konxibelelwano. nokuba, kwi uninzi meko uya kufumana ixabiso elingcono malunga kutshintshiselwano Ukongezelela zikho nezinye iinkalo Kubaluleke kakhulu ukuba kuphela konxibelelwano yokubheja zinika. Ngaphezulu kule kamva’ Ngoko Yintoni A Exchange nokubheja? Beka kakhulu ngokulula, zokwabelana emidyarho yindawo ekhuselekileyo apho amalungu oluntu ukubheja unako babelane ozithembileyo kunye nabanye bengaziwa, kuyahlabana ukuba ukhankanye ngokwabo. Iinkampani exchange asebenze ngokulula njenge 'kubantu’ uze utshatise izizwe ozithembileyo. Njengoko kungekho imida bookie ukuba libandakanye imiba, amaxabiso basoloko kakhulu inqweneleka. Iinkampani ukubheja exchange ukwenza imali yabo ngokuthatha intlawulo nezekhomishini ozithembileyo ngokuphumelela. Oku ngesiqhelo kummandla 3 – 5%, kodwa kuthathelwa ngqalelo le, yinto eqhelekileyo ukufumana amaxabiso ngakumbi ngokutshintshiselana. Iziphumo ezihlanganisiweyo ngamaxabiso angcono xa idityaniswe isicwangciso staking olungileyo, lungawenza umahluko phakathi kwenu adala ingeniso esempilweni okanye ilahleko embi. Ukusebenzisa utshintshiselwano akuthethi ukuba ngokuqinisekileyo uza kuphumelela rhoqo! Usenakho ukufumana ixabiso okulungileyo ababheje ngokwakho okanye egqithe tipster professional kodwa isiphumo lokufumana imbuyekezo entle ozithembileyo ngokuphumelela eziya komeleza yebhanki yakho ukubheja ndikukhusele ngexesha sizizifanya yokulahlekelwa. Abantu abaninzi basebenzisa konxibelelwano ukubheja kwi-intanethi, kodwa unako bakubhejele kwimfonomfono. Ukubheja eziluncedo Exchange Kwakunye nokufumana rhoqo amaxabiso ngcono xa uxhasa u ukhetho, zokwabelana kwakhona unike ongcakazayo nezinye iingenelo ezibalulekileyo kakhulu Abamkeli zemveli. Ezinye zeenzuzo eziphambili zezi: 1) Ukukwazi ukubeka ukhetho xa ucinga ayiyi kuphumelela. 2) Ukukwazi BACK okanye ufake ukhetho kufakwa. (Oku kwahlukile kakhulu ukuba uyazi kakuhle Way bet ngasinye ezifundiswayo bookies kwaye kunokuba enamandla kakhulu). 3) Ukubheja kugqatso ngeziganeko ezininzi kuqukwa WAMAHASHE YONGCAKAZO. Oku kukunika ezininzi, waluvula ucango iindlela ezintsha ukuze naxhala nina iingeniso. 4) Ukuba iyaphumelela kakhulu, akuyi kuba inkampani exchange ukusongela ukuvala akhawunti yakho phantsi. Ingongoma ebalulekileyo kakhulu ! 5) Ukukwazi urhwebo iintshukumo ixabiso ukubheja iziganeko ukuqinisekisa wena inzuzo nokuba isiphumo. 6) Amathuba Arbitrage. Bookie nexabiso exchange kungangqinelani badla kukuvumela ukuba uthathe kungcakazo HAYI UMNGCIPHEKO. Abo ezinye izibonelelo ezingundoqo usebenzisa exchange ukubheja kwaye ndiya umbe nzulu ezi uze uchaze indlela onokuyisebenzisa ukuze inzuzo yakho kumanqaku ukubheja elizayo. Kuba nasesi nqaku, lets qwalasela ngongoma 1 ngasentla, Awufaki ukhetho Lose. KUFAKA A Ukhetho Walahlekelwa ‘ A advanteji Major Of The Utshintshiselwano nokubheja Mhlawumbi ke Eyona nto ibalulekileyo lorhwebelwano ukubheja kukwazi ukuba ubeke ukhetho. Kodwa ngaba ngokubekwa indlela yokukhetha kuthetha? Awufaki ukhetho udla ngokubizwa ngokuba 'Ukudlala indima ukubheja'. Ifana bookie, Ukuba nizisa ngexabiso ngokuchasene ukhetho / isiganeko kwenzeka (umzekelo. ihashe othile ukuphumelela ugqatso okanye umdlalo webhola ophela njenge draw). Onokuyenza kuphela le, xa ngaba ngokoluvo lwakho kukho ithuba elikhulu ukuba ihashe liya athandwe okanye umdlalo webhola akuyi kuphelela njenge draw. Konxibelelwano ukubheja utshatise ngokulula ozithembileyo mfo nabanye abathengi abacinga ongafaniyo kuwe (umzekelo, abacinga ukuba ihashe liya kuphumelela okanye umdlalo uza kuphela njenge draw). Amatyala Lay Andiqondi ukuba nisondeze ukugqiba ingakanani imali eza kufuna ukuba 'ahlawule’ Ukuba ukhetho okunene uphumelela (kanye bookie ntoni xa bhejo nabo). Ngoko ke ukuba ngaba wokumisa bet ecaweni of '10 ngexesha 5.0 (4/1) ngokuchasene ukhetho, uya kuba noxanduva lokuhlawula phandle '40 kwi-akhawunti yakho ukuba ukhetho iphumelele (Enye wamahashe ufumana '10 umva plus '40 ingeniso yabo). ukuba kunjalo, olukheto ifuna ufumana ukugcina '10 efakwe ngamanye kubhejwe (kanye nje bookies ubenzileyo zakho zonke bets sokuphulukana yonke le minyaka!). Yinto elula nje ukuba. ngoku, nokuba ucinga 'elikhulu, Ndiza ngokulula walala zonke bangaphandle elikwisikhundla sicoce '. YEKA! Musa na uye phantsi le ndlela. Ukuba uyaqhubeka ngokubeka bets abangaqeqeshwanga okukhethiweyo ekurhwebeni kuyahlabana eliphezulu kakhulu (umzekelo 50/1), uya kuphumelela rhoqo kodwa xa 1 kubo uza kuqala uza mhlawumbi kuzisula zonke lokuwina zakho yaye ngaphezulu! Umntu ongatshatanga Ubhejo '10 abangaqeqeshwanga 50/1 uza kubona ukuba noxanduva uhlawulayo '500 kufuneka win yokhetho! ngoko ke, Mna zicebisa ukuba isigqibo phezu umda eliphezulu ebhadlileyo ngenxa kuyahlabana ibuthuma baze babambelele kuwo kungakhathaliseki ukuba yintoni. Khawucinge nje ngendlela umntu wajika zingaphi balithandayo phezu kuzo iintlanga ihashe yonke imihla lonyaka ukuba mhlawumbi ziyafumaneka ukubeka kuyahlabana mfutshane kakhulu ezifana 1.5 (1/2). liability yakho phezu bet '10 ibuthuma kwezi nciphile kuphela 5, okanye '50 kwi '100 bet ibuthuma. Ndiya uthanda ukugcina ozithembileyo yam ibuthuma kuyahlabana ngezantsi 4.0 (3/1) kodwa oko ukhetho zam nje kodwa ukunika into ukuya kwi. Iliwa Flexible / Ukubeka nguMyalelo Andiqondi ukuba ucela ngokucacileyo kufuneka esengqiqweni ukuze kubekho nokuyifeza, kodwa ukuba awuyithandi ixabiso langoku icelwa ngamanye bamahashe uyakwazi ngokulula zibeka 'umyalelo’ yoTshintshiselwano kuyahlabana lwenu nethemba lokuba ekugqibeleni umntu yamkela umnikelo wakho. (umzekelo usenokuvakalelwa ukuba ixabiso langoku 3.0 (2/1) liphezulu kakhulu ngexabiso ukuya kumangala ukhetho oluthile, ngoko ke idini bet abangaqeqeshwanga 2.75 (7/4) endaweni). Ukuba unethamsanqa ixabiso yakho kakuhle ukungqanyaniswa. Ukuba isiganeko iqala ngaphandle etelekiswe ukubheja kwakho ibuthuma, bet wakho ngokulula irhoxisiwe ukuze bafumane / ndingalahli nento. isishwankathelo Nokubheja Lay unokuvakala ingakuphazamisa ukuba newbie exchange, kodwa siyakholwa kum kungekudala uba tye kakhulu yaye uya kufumanisa ukuba ngokubekwa Olukhetho phi rhoqo kunokuba ucinga. Makhe sinyaniseke, kufuneka kube lula ukuba ukcola ihashe uziva ngokuqinisekileyo uya kulahlekelwa kwi umyinge 12 imbaleki ugqatso, ngaphezu ukufumana ophumeleleyo enye! Kulungile oko kuba yinxalenye 1 amanqaku zam exchange ukubheja. ngokuyinxenye 2, Ndiya kuya echaza iimarike Indawo Ukubheja Exchange nendlela onokuzuza kuzo. Tshintshano ukubheja banaba kuBheja – Intshayelelo
･ Betting Exchanges and Lay Betting – Intshayelelo
izigaba: bonke, ball, foot, football, Iron tags: ngayo, account, art, article, articles, arts, ibhola, bank, benefit, commission, company, lemoto, earn, ekupheleni, unyawo, football, gambling, zempilo, horse, horse racing, hr, intern, iron, list, living, margin, imarike, imali, yaye, offer, ngayo, opportunities, payment, abantu, siqu, phone, plan, profit, irenti, rep, risk, success, trade, trading, ukuphumelela, umsebenzi
Uviko kwicala labo
Ngoku baxhobise ngokwaneleyo Golf Carts nezi zokuhombisa
Gas soulwax Vs Electric soulwax
Best ukhanga Ukuze Sebenzisa In Fishing
eqinisekiswe Elk & Ixhama magqwirha On neefama Private
Bonisa ogqibeleleyo Impumelelo yakho
Oko Unokukwenza anamadyungudyungu Xa behamba
begalufa – Sushukuma!
Izipho amaphenyane lweKrismesi
The Story Of The Ultimate Fighting Championship, inxalenye 1
Ehamba emanzini Unique New eNgilani
Ukubaluleka zolonwabo Fishing
Fly Fishing eRashiya
Brazil ilungele Abanye Action iNdebe yeHlabathi
Ukuloba ahlambulukileyo Trout
brady Quinn : 2007 Bayile jolie Day
Ngaba Ukulungele ukuba Tech High Golf